ရေထဲခုန်ချသွားတဲ့အမျိုးသမီးကို ဆူမိုကစားသမားအယောက် ၂၀ ကသွားရောက်ကယ်ဆယ် !!! - JAPO Japanese News
ကြာ 11 Jun 2020, 15:20 ညနေ
တိုကျိုရဲ့ Adachi အရပ်မှာ တံတားပေါ်ကနေချောင်းထဲကိုခုန်ဆင်းသွားတဲ့ အသက် ၃၀ အရယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အနီးအနားက ဆူမိုအားကစားရုံအတွင်းမှာရှိတဲ့နပန်းသမား ယောက် ၂၀ လောက်ဟာ သွားရောက်ကယ်ဆယ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောပြချက်အရ ၁၀ ရက်နေ့မနက် ၅ နာရီခွဲအကျော်၊ Adachi ရပ်ကွက်တွင်းမှာရှိတဲ့တံတားကနေ ၃ မီတာအမြင့်ရှိတဲ့ချောင်းထဲကို အသက် ၃၀ အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးခုန်ဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုကိုယ် သေကြောင်းကြံစည်တယ်လို့ ထင်ရပါတယ်.
ဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ အော်ပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့တာကြောင့် အဲ့ဒါကိုသတိထားမိသွားတဲ့ အနီးအနားမှာရှိတဲ့ Sumo Sakaigawa အသင်းရဲ့ နပန်းသမားအယောက် ၂၀ လောက်ဟာ ပြေးလာကြပြီး၊ အမျိုးသမီးကိုချောင်းထဲကနေ ဆွဲတင်ခဲ့ကြကြောင်း သိရပါတယ်။
ထိုအမျိုးသမီးကိုတော့ ဆေးရုံကိုခေါ်သွားကြပြီး၊ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရမှုအခြေအနေတော့ မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။
Takenotsuka ရဲဌာနကလည်း Sakaigawa အသင်းနဲ့အတူ အကူအညီတောင်းပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသားကို ကျေးဇူးတင်စာတစ်စောင်ပို့ပေးမယ်လို့လည်း ဆွေးနွေးလျှက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။
ဒီအမျိုးသမီး ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုတော့မသိရသေးပေမဲ့၊ သေချာတာကတော့ အသက်ကိုသေစေနိုင်လောက်တဲ့အထိ ဒုက္ခပေးတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်နေစဥ်ကာလအတွင်း တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်း အခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ လူ့အသက်တစ်ချောင်းကိုအချိန်မီကယ်လိုက်နိုင်တာကတော့ ကျေးဇူးတင်ဖွယ်ကောင်းပါတယ်။